Fitsipika vaovao momba ny sisintany ho an'ny mpitsidika kanadiana: fanjakana amerikana 10 no handray ireo kanadiana amin'ny tànana malalaka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Fitsipika vaovao momba ny sisintany ho an'ny mpitsidika kanadiana: fanjakana amerikana 10 no handray ireo kanadiana amin'ny tànana malalaka
Vaovao Mafana • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • LGBTQ • Vaovao Mafana any Mexico • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Afaka manomana fialan-tsasatra amerikanina any Etazonia izao ny Meksikana sy Kanadiana. Hatramin'ny 1 Novambra, ny Security Homeland any Etazonia dia hanokatra ny sisin-tany eo amin'ireo mpifanila vodirindrina amin'i Etazonia ho an'ny dia tsy ilaina, anisan'izany ny fizahan-tany.
Ny trano fotsy dia nanamafy ny talata alina fa ireo mpitsidika vita vaksiny feno avy any Canada dia afaka mandeha any Etazonia amin'ny fiampitana sisintany amin'ny 1 novambra.
Tsy voalaza mazava izay vaksiny horaisina na raha fatra mifangaro no mendrika.
Hisokatra amin'ny 1 Novambra ihany koa ny sisintany amerikana ho an'ireo mpitsidika Meksikana
Ireo izay manome porofon'ny fanaovana vaksiny ary mitady hitsidika fianakaviana na namana tonga mpizahatany na mpiantsena dia avela hiditra any Etazonia indray hatramin'ny Novambra.
Ny filoham-pirenena amerikana Biden dia nanainga ny fandrarana fandrarana toy izany amin'ireo vahiny mitady handeha any amin'ny firenena avy any ampitan-dranomasina, anisan'izany i Eropa.
Ny famongorana ny fameperana dia mihatra amin'ny sisin-tany manelanelana Etazonia sy Mexico.
Hetsika fandraisana ity amin'ny fanokafana indray ny Indostrian'ny fizahantany sy fizahan-tany amerikana.
Talohan'ny areti-mandringana tamin'ny 2019 dia manodidina ny 20.72 tapitrisa ny mpitsidika avy any Kanada mankany Etazonia.
Maherin'ny 4.1 tapitrisa ny Kanadiana mitsidika an'i Florida isan-taona, anisan'izany ireo mpitsidika vetivety sy snowbirds amin'ny ririnina maharitra.
Kanadiana maherin'ny 3.1 tapitrisa no mitsidika an'i New York isan-taona. Ny manintona # 1 dia mazava ho azy New York City, Iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra manerantany, i New York dia tadio foana, miaraka amin'ireo tranonkala malaza isaky ny anjarany ary tsy ampy ny fotoana hahitana azy rehetra ao anatin'izany ny seho lalambe, kilasy eran'izao tontolo izao. fiantsenana, ny Statue of Liberty, Empire State Building, Brooklyn Bridge, Central Park, ary tranombakoka malaza manerantany.
Kanadiana maherin'ny 2.5 tapitrisa no mitsidika ny fanjakan'ny Washington isan-taona miaraka amin'ny fidirana amin'ny fiara mora manamorona ny faritanin'i British Columbia. Seattle no vavahady mankany amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Pasifika, izay misy tandavan-tendrombohitra mahatalanjona mijery ny ala mando sy ny morontsiraka mahatalanjona. Valan-javaboary roa, ny Mount Rainier ary ny Olaimpika, dia manolotra fihaonana mahatalanjona miaraka amin'ny natiora toa ny Nosy San Juan eo amoron'ny morontsiraka.
Kanadiana 1.6 tapitrisa mahery mitsidika an'i California isan-taona. Ireo tanàna, morontsiraka, valan-javaboary, ary zava-mahatalanjona voajanahary toa ny toerana hafa eto an-tany, dia mahatonga an'i California ho tany mahaliana ho an'ny mpandeha. Ireo tanànan'ny vavahady any San Francisco sy Los Angeles dia toeram-ponenan'ny sasany amin'ireo toerana malaza indrindra amin'ny fanjakana, manomboka amin'ny Golden Gate Bridge mankany Hollywood sy Disneyland.
Kanadiana 1.3 tapitrisa mahery mitsidika an'i Nevada isan-taona, tonga any Las Vegas ny ankamaroany. Ny velaran-tany mahavariana an'i Nevada dia matetika manaloka ny famirapiratany sy ny glitz an'ny tanànany lehibe indrindra, Las Vegas. Nevada dia fanjakana manana fahasamihafana voajanahary tsy mampino, miaraka amina toerana mahafinaritra maro, fitsangatsanganana an-tsary, ary fotoana mahafinaritra ho an'ny hetsika ivelany any amin'ny valan-javaboary sy toerana fialambolin'izy ireo.
Mihoatra ny 1.3 tapitrisa ny Kanadiana mitsidika an'i Michigan isan-taona miaraka amin'ireo mpandeha fahavaratra maro miala any Ontario. I Michigan no trano ahitana toerana mahafinaritra, farihy mijoalajoala, sakafo mahafinaritra, toerana eo an-toerana ary vatosoa miafina. Ity fanjakana mahatalanjona ity dia eo amin'ny sisin'ny 4 amin'ny Great Lakes ary misy farihy anaty 11,000 mahery, miparitaka manerana ny peninsulas ambany sy ambony ka mahatonga azy io ho toerana mafana amin'ny Kanadiana.
Kanadiana 1 tapitrisa mahery no mitsidika an'i Arizona isan-taona, manomboka amin'ny mpitsidika lavitra ka hatramin'ny lanezy lava. Ao afovoan'i Amerika Andrefana Andrefana, Arizona dia feno fahagagana voajanahary, tanàna mavitrika ary tanàna kely mahafinaritra. Ity fanjakana ity dia manana ny zava-drehetra avy amin'ny Grand Canyon, vato mena ao Sedona, firenena misy divay, farihy tsy mampino, fitsangatsanganana an-tendrombohitra, havoana ski amin'ny ririnina, hetsika ara-panatanjahantena kilasy eran-tany ary mazava ho azy ny toetrandro mahatalanjona.
Kanadiana 800,000 XNUMX mahery no mitsidika an'i Hawaii isan-taona. Ny nosy Hawaii dia malaza amin'ny endrika masiaka harambato, riandrano, ravina tropikaly sy morontsiraka misy fasika volamena, mena, mainty ary maitso mihitsy aza. Ny taona manodidina ny toetr'andro tonga lafatra miaraka amin'ny fomba fiainana mahafinaritra mahafinaritra dia nahatonga an'i Hawaii hitsoaka ririnina malaza ho an'ny Kanadiana! Ireo nosy enina tokana dia manolotra traikefa miavaka izay hitaona ny mpitsangatsangana rehetra.
Kanadiana 750,000 XNUMX mahery no mitsidika an'i Maine isan-taona. Manodidina ny iray isaky ny olona enina mitsidika an'i Maine dia avy any Canada, ary saika ny antsasaky ny olona avy any Ontario. Ny fanjakan'i Maine, antsoina hoe Vacationland malaza, dia mihoatra ny toerana iray fotsiny, zavatra iray niainana izay hanala ny fofonainao. Maine dia mamihina izay rehetra marina, tsy manam-paharoa ary tsotra, ary mankafy ny toerana malalaka amin'ny ala lalina sy ny morontsiraka marevaka.
Kanadiana 680,000 XNUMX mahery no mitsidika an'i Pennsylvania isan-taona. Ireo tanàna be pitsiny any Pennsylvania sy ireo toerana manintona anao any ivelany dia miantso anao hizaha hetsika isan-karazany. Azonao atao ny mahita ny Liberty Bell malaza any Filadelfia, mandeha amin'ny dian'ireo mahery setra tamin'ny ady an-trano tany Gettysburg, na nanakorontana kolontsaina sasany tao amin'ny Museume Carnegie any Pittsburgh.